Anonymous April 1, 2010 at 12:23 AM
တိုင်ပြောမယ် ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား
khet myint myint April 1, 2010 at 12:40 AM
အိမ်ရှင်းရမှာနဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူး လဲရမှာကိုး၊အိမ်ကြီးရှင် ကလည်း တဖန်ပြန်နောက်တာ ဖစ်နေဦးမယ်။
ကြည် April 1, 2010 at 1:18 AM
" တကယ်တော့ စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေပဲ မဟုတ်လား… ရှင်းလင်းနေလဲ မိတ်ဆွေပဲ ရှုပ်ပွနေလဲ ဒါတွေဟာ မိတ်ဆွေတွေပဲ မဟုတ်ဖူးလား…။"
Hmoo April 1, 2010 at 3:36 AM
အစ်မ ဝေခွဲမရရင် လာကူပစ်ပေးရမလား။ လိုရင် ပြောနော်။
ကိုကြီးသနားပါတယ်။ ဘ၀တူမို့ ကိုကြီးကို ကိုယ်ချင်းအများကြီးစာ
မေဓာဝီ April 1, 2010 at 4:33 AM
မသက်ဝေအိမ်မှာ သိမ်းထားတာတွေက စုံပလုံစိနေပါလား ဘော်တယ်ဆိုင်တောင် ဖွင့်စားလို့ရပြီ။ ဟီး။
ကတိတွေပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ တကယ်များ လွှင့်ပစ်တော့မလို့လားလို့ ... မသက်ဝေက ဖူးလ်လိုက်တာပေါ့လေ။ သူကလဲ လိုချင်တာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတာ ဖူးလ်တာဖြစ်နေရင် ဒုက္ခနော်။ ဖူးလ် ^2 တွေ ဖြစ်တော့မှာပဲ။ :)
ပုလင်းတွေများလှချီလား ။ ၇ှိပီးသားပုလင်းဆိုနောက်ကို ပုလင်းပါတာမ၀ယ်နဲ့ပေါ့ အမရဲ့..။
ဒီမှာတော့ ဘာပစည်းမဆို ခွဲပစ်၇လွန်းလို့ စိတ်ရှုပ်တယ်။
Vista April 1, 2010 at 7:46 AM
အလို ၄ ၄ ..မလွယ်ပါလားနော်...........
:) April 1, 2010 at 8:48 AM
ပုလင်းဒေ... ဝဒေ..... အိတ်ဒေ...ဝဒေ.....
Thant April 1, 2010 at 9:25 AM
ဒီနေ့မှာ ကတိပေးလိုက်တာပေ့ါ..... မသက်ဝေ...ပိုင်တယ်ကွာ...... :D
သက်ဝေ April 1, 2010 at 9:59 AM
ခမမ... အိမ်ကြီးရှင်က မဖူးလ်တတ်ပါ ခင်ဗျာ...း))
ကြည်... မဟုတ်လို့လား... ပြောပါအုံး... ပြောပါအုံး... ကြည်က ဘယ်သူ့ဘက်ကလဲ... ပြော...း))
Hmoo... လူကြီးရော ကလေးပါ ဖတ်လို့ရပါတယ်... No worries... :P
အော... မွန်က ကိုကြီးဖက်ကကိုး...း)) ရပါဒယ်... ရပါဒယ်...
မေ.. ဟုတ်ပါ့.. ဟုတ်ပါ့... သူလဲ အဲလိုပဲ ပြောတတ်တယ်... ဘော်တယ်ကုလားအိမ် ဖြစ်နေပြီတဲ့... သူကတော့ ကိုယ့်ကို မဖူးလ်လောက်ပါဘူး...း))
မြတ်နိုးလေး... ဆူပါနဲ့လေ... ပြီးတော့ အထုပ်က သောက်လို့ မကောင်းဘူး... အစွဲအလမ်းပေါ့လေ...
Vista... ချစ်စရာ... အလို ၄ ၄... တဲ့... အခုမှတွေ့ဖူးတယ်... အသစ်ပဲ...
း)... ကျွမ်းကျင်မှု အပြည့်ပါလား... အသံထဲမှာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို မြင်နေရတယ်... ဟီဟိ
သန့်ကလေး... ပိုင်ရမယ်လေ...း))
Pwint Myue Zin April 1, 2010 at 10:24 AM
၀ါသနာတွေတူနေပြီမမရေ.. shopping bag တွေသိမ်းတာရော.. ဗူးတွေပုလင်းတွေစုတာရော.. ဗူးတွေခွက်တွေဝယ်လွန်းလို့ ယောက်ျားက ဆူလှပြီ.. ဆူလဲ ၀ယ်မိနေတာပဲ.. ကြိုက်တာကိုး.. shopping bag တွေကျတော့ တစ်ခုခုထည့်ဖို့လိုတဲ့အခါ သူပဲလာလာတောင်းတတ်တာလေ..
P.Ti April 1, 2010 at 11:16 AM
အမ လူလည်ကျနေပါတယ် ဗျို့ ...
sonata-cantata April 1, 2010 at 11:26 AM
ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ မသိဘူး ဒီပို့စ်ဖတ်ပီး ဂါဖီလ်နဲ့ သူ့ဘော့စ်ကို စိတ်မျက်စိထဲ တန်းမြင်တယ်။ ဆိုင်လားဟင် သက်ဝေ
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ April 1, 2010 at 12:30 PM
အင်း စာအုပ်တွေ VCD တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဖွတာက အိမ်က အမျိုးသားနဲ့ တူပြီးတော့ shopping bag တွေ container ပုလင်းတွေ ဗူးတွေ စုတာက ပူးတေနဲ့ တူနေတယ်မမရေ... ဖတ်ပြီး တော်တော်လေး ရီလိုက် ရတယ်..
T T Sweet April 1, 2010 at 12:40 PM
ဟုတ်ပ အစ်မရေ .... ဂါးဖီးလ်က သူ့ဘော့စ်ကို လူလည်ကျတာတွေ သိပ်များနေပြီလေ ....
Happy April Fool!!!!
rose of sharon April 1, 2010 at 2:22 PM
ကိုယ်လဲအရင်ကအိတ်တွေအရမ်းကြိုက်ပြီး ဟောင်းသွားလဲမပစ်ရက်တာတွေ အများကြီးဘဲ... ခုတော့ နဲနဲစီရှင်းထုတ်နေရတယ်....
ချစ်ကြည်အေး April 1, 2010 at 8:50 PM
ကိုကြီးက ပြောတယ် သက်ဝေ အိမ်ရှင်းပြီးမှ သူ ဧပရယ်ဖူး လုပ်လိုက်တာကို ပြောမယ်တဲ့...အဲဒါ...
ဟောတော့ ဖော်လိုက်မိပြီ ကိုကြီးရေ...ဟိ...:)
သင်းနွယ်ဇင် April 1, 2010 at 9:46 PM
ဝါသနာတူလို့ အားပေးလိုက်ပါတယ် "စုသာစု"လို့။
Moe Cho Thinn April 2, 2010 at 3:26 AM
အရင်က အိတ်၊ အခွေ နဲ့ စာအုပ်ပဲ စုတာ၊ အခု ကင်မရာ ပစ္စည်းတွေပါ ပါလာပြီ လို့ ကြိုသတိပေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်များလားးးးး???? စဉ်းစားသွားတယ် မမရေ။
ချိုသင်းကတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာစားပြီးရင် ရလာတဲ့ bill တွေကို သိမ်းထားပြီး ခဏခဏ ထုတ်ကြည့်တာ ၀ါသနာပါတယ်။ ဟီးဟီး ရူးပါ့နော်။ ပေါ်ကုန်ပြီ။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း April 2, 2010 at 7:24 AM
ဪ....ငါ့နှမ မယ်သက်တို့ ပိုက်ပိုက်ထည့်ဖို့ အိပ်စုနေသလားအောင်းမေ့တယ်...နှစ်ကျပ်ခွဲကို ငါးကျပ်တန်ဖြစ်တော့မယ်....
ညီမလေး April 2, 2010 at 7:39 AM
စာအုပ်တွေတော့ မပစ်ပါနဲ့ နှမျောစရာ ....
ဒါနဲ့ မမသက်ဝေစာရေးပုံက ချစ်စရာကောင်းမှကောင်းတော့း))
အပြုံးပန်း April 2, 2010 at 9:09 AM
MrDBA April 2, 2010 at 11:46 AM
Wide Angle Lens ရတော့မယ်ပေါ့ ..မိုက်ထှာ
PAUK April 3, 2010 at 7:58 AM
khin oo may April 3, 2010 at 10:53 AM
ခင်မင်းဇော် April 4, 2010 at 12:29 AM
ဟင် သက်ဝေညီမ ဆိုးပါ့...
တို့တွေက အပစ်လွန်သွားလို့ တခါတလေ ထည့်စရာတောင် မရှိ...
ရေမွှေးလဲ မကြိုက်အေ...ခုတလော ဆို ဘာမှ မကြိုက်ဖြစ်နေလို့...
ရွှေပြည်သူ April 4, 2010 at 8:44 PM
အိတ်တွေကြိုက်လို့ အများကြီးဝယ်ပြီး သိမ်းမိတာ တူတယ် အစ်မသက်ဝေး))
သဘောအကျဆုံးက နောက်ဆုံးပိတ်စာပိုဒ်ပါပဲး))))
Bunny April 4, 2010 at 10:11 PM
သက်ဝေ April 4, 2010 at 11:06 PM
ညီမ ပွင့်၊ ပူးတေ နဲ့ ရိုစ့်၊ မောင်လေး ကိုပီတိ၊ သူငယ်ချင်း သီတာ၊ တီတီဆွိ၊ ချစ်ကြည် နဲ့ သင်းနွယ်ဇင်၊ ညီမ ချိုသင်း၊ ကိုကြီးကျောက်၊ ညီမလေး၊ အပြုံးပန်း၊ ကိုကိုဒီဘီ၊ ချစ်ပေါက်၊ မမ ခင်ဦးမေ နဲ့ မမ ခင်မင်းဇော်၊ ညီမ ရွှေပြည်သူ နဲ့ ဘန်နီ... ချစ်စဖွယ် မှတ်ချက်များအတွက် များစွာ ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာလျှက်...
အမှန်ကတော့ ဒီနေ့ သွားဝယ်ဖို့ပါပဲ... ဒါပေမယ့် ချန်ဂီ တခေါက်သွားလိုက်ရတာရယ်၊ မိုးတွေရွာနေတာရယ်ကြောင့် ဘယ်မှ ဆက်မသွားဖြစ်လိုက်ဖူး... နောက်တပတ်ကို ရွေ့သွားပြီ...။
ကိုယ် ကြေကွဲနေပြီ... လို့ (တိုးတိုးလေး...) ဆိုနေမိတယ်...း((
ဇွန်မိုးစက် April 5, 2010 at 12:41 AM
ခုတော့ဇွန်သိပြီ.... မမသက်ဝေ အသိမ်းအဆည်း အစုအဆောင်းကောင်းကြောင်း..း)
မမရေ ခုမှလင့်ခ်ယူဖြစ်တယ်။ ခွင့်ပြုနော်။
kaungkinpyar April 6, 2010 at 8:15 PM
ဘာမှ မသိမ်းတတ်သူ တယောက်..လိုချင်မှ လိုက်ရှာတတ်သူ တယောက်ပါ...
မမ ဝယ်ပြီးရင် အကြောင်းကြားနော်...ဒါ့ပုံ ရိုက်မယ်..